डानियल मार्टेन सेरानो। Insomnia | का लेखकसँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
डानियल मार्टिन सेरानो उपन्यास मा एक पिच कालो शीर्षक संग प्रीमियर गरिएको छ, Insomnio. तर यो Madrilenian पहिले नै एक लामो इतिहास छ श्रृंखला स्क्रिप्टराइटर जसमध्ये टेलिभिजन अस्पताल केन्द्रीय, मखमली, अपोइन्टमेन्टमा अन्धा, एल प्रिन्सेप, राजद्रोह y उच्च समुद्री। थप रूपमा, उनी म्याड्रिड फिल्म स्कूलमा टेलिभिजन स्क्रिप्टका प्राध्यापक हुन्। यसमा साक्षात्कार उनले हामीलाई उनको उपन्यास र अरू धेरैको बारेमा बताउँछन्। म दयालु र समय को ठूलो कदर गर्छु कि उसले मलाई समर्पण गर्यो।
डेनियल मार्टेन सेरानो - साक्षात्कार
आज लिटरेचर: यति चिसो, ताल र लिपि प्रविधि वा उपन्यास ताल र प्रविधि? वा किन छनौट गर्नुहुन्छ?
डेनिएल मार्टेन सेरानो: अन्त्यमा यो सबै एउटा कथा भन्न को लागी हो। प्रविधीहरू फरक छन्, हो, तर के सबैभन्दा फरक बनाउँछ एक उपन्यास को लागी एक लिपि काम गर्ने तरिका हो। लिपिहरू लेख्नु भनेको एक टोली प्रयास हो जसमा धेरै व्यक्तिले भाग लिन्छन् र तपाईंसँग उत्पादकहरू, नेटवर्कहरू र प्लेटफर्महरूको राय छ, त्यसैले धेरै जसो निर्णयहरू सँगै गरिन्छन्। उपन्यासको सामना गर्नुपर्दा, म केवल यी निर्णयहरू लिने व्यक्ति हुँ, के हुन्छ र यो कसरी हुन्छ भनेर निर्णय गर्ने मँ हुँ। र लिपिमा काम गर्ने तरिकाको विपरित, कहिलेकाँही उपन्यासले मलाई दिने स्वतन्त्रताको सराहना गर्दछ।
तर म स्क्रिप्ट वा उपन्यास को लागी प्राथमिकता छैन, वा कम्तिमा यो मलाई एक वा अर्को छनौट गर्न गाह्रो छ। धेरै अवसरहरूमा यो तपाईं बताउन चाहानुहुन्छ भन्ने कहानी जुन यो कसरी भन्यो भन्ने निर्णय गर्दछ, यदि स्क्रिप्टको रूपमा, उपन्यास, कथा र एक नाटक।
AL: एक पटकथा लेखकको रूपमा लामो क्यारियरको साथ, तपाईं अब पिच ब्ल्याकमा उपन्यासको साथ शुद्ध र साधारण साहित्यमा डेब्यू गर्दै हुनुहुन्छ, Insomnio। हामी किन यसमा छौं?
DMS: लगभग सबै पेशा मा एक प्रस्तावित छ नयाँ चुनौतिहरु र मेरो लागि यो उपन्यास लेख्ने थियो। बर्ष पछि स्क्रिप्ट लेख्न र केही उपन्यासहरू सुरु गरेपछि मैले निर्णय गरे कि मैले एउटा समाप्त गर्नु पर्छ, मलाई देखाउनुहोस् उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ त्यसो गर्न। त्यो मेरो पहिलो प्रेरणा थियो। यो पहिले नै प्रकाशित गर्न सक्षम भएको मेरो पहिलो अपेक्षा भन्दा बढि छ।
En Insomnio पाठकले एउटा भेट्टाउनेछ कालो उपन्यास, धेरै गाढा, दुई प्लटको साथ, एक गणना विगतमा र अन्य वर्तमान मा। पहिलोमा, नायक थॉमस Abad, को एक इन्स्पेक्टर हो पुलिसवाला खोज्ने आरोपमा asesino विभिन्न महिलाहरु को। जब केस प्रगति हुन्छ तपाईले त्यो पत्ता लगाउनु हुन्छ उसको भाइ केहि छ संलग्न। तपाईलाई बचाउन कोशिस गर्दै तपाइँको काम हराउने छ।
वर्तमान भागमा, टोम्सले रातको रूपमा कार्य गर्दछ पाले चिहान भित्रबाट र त्यहाँ छायाँमा लुकेका कोहीले पनि उत्पीडन गरेको उनले महसुस गरे कि त्यो केस अझै बन्द भएको छैन।
Insomnio संग एक उपन्यास छ प्लट कि अधिक र अधिक hooking छ र त्यसले पाठकलाई विश्राम प्रदान गर्दैन। एक धेरै छ राम्रो वातावरण, ती व्यक्तिहरूको अग्रणी चरित्र जो तपाईको आत्मामा प्रवेश गर्छन् र, यो गलत भन्न को लागी गलत छ, तर यो हो धेरै राम्रो लेखिएको। अब यो पाठ्यहरु को हो जसले यसको न्याय गर्नु पर्छ।
AL: समयमै फर्केर जाँदा, तपाईंले पढ्नु भएको पहिलो पुस्तक सम्झना छ? र पहिलो कथा तपाईंले लेख्नुभयो?
डीएमएस: मेरो पहिलो पढाई, मेरो पीढ़ी को धेरै को जस्तै, बी संग्रह मा पुस्तकहरु थिए।स्टीम बो, द फाइभ, जुल्स भेर्न, अगाथा क्रिस्टी...
मैले लेखेको पहिलो चीजको लागि मसँग स्पष्ट मेमोरी छैन, मलाई थाहा छ स्कुलमा जब तपाइँले केहि लेखन गर्नुपर्‍यो बाहिर खडा गर्न प्रयोग। बिस्तारै, हो मैले कथा लेख्न शुरू गरें र यसरी म सिर्जना गर्दैछु केही प्रकारको चाहिन्छ यसले मलाई अधिक र अधिक लेख्न प्रेरित गर्यो। पेसोआले भने कि उनको लागि लेख्नु नै उनी एक्लै रहनु हो र म त्यो वक्तव्यसँग पूर्ण सहमत छु।
AL: त्यो किताब जुन तपाईंको आत्मालाई छोयो ...
DMS: धेरै। मैले एउटा छनौट गर्न सकेन। ती पुस्तकहरु जुन म लेखक को काम को लागी सचेत छु पछाडि मेरो मार्क गरीएको छ। म तिमीलाई नाम दिन सक्छु Beehive, सेलाबाट, नरम रात होफिजजेराल्ड द्वारा, शहर र कुकुरहरू, वर्गास लोलो द्वारा, उल्लूको रुवाइ, हाइस्मिटह, नेफान्डो, मोनिका ओजेडा द्वारा, मारियासका अधिकांश उपन्यासहरू ...
AL: र सन्दर्भ वा प्रेरणा को त्यो मनपर्ने लेखक? तपाईं एक भन्दा बढि चयन गर्न सक्नुहुनेछ र सबै युगहरूबाट।
डीएमएस: हुनसक्छ यो जेभियर मारियास लेखक म सबैभन्दा भन्न सक्दछ कि मलाई प्रभावित। मैले उनलाई त्यो उमेरमा पढ्न थालें जब यो स्पष्ट हुन थाल्यो कि म आफूलाई लेख्नको लागि समर्पित गर्न चाहान्छु। उसको शैली, उसको बोल्ने तरिका केहि त्यस्तो चीज हो जुन म दिमागमा धेरै पाउँदछु। तर त्यहाँ अरु धेरै छन्: वर्गास लोलो, गार्सिया मार्क्वेज, लोबो एन्ट्यून, रिचर्ड फोर्ड, पेट्रसिया हाईस्मिथ, जॉयस क्यारोल ओट्स, सोफी ओक्सानेन, मार्टेन गाइट, Dostoevsky, Pessoa...
डीएमएस: उपन्यास जुन म प्रायः पढ्छु ग्रेट Gatsby र उनी एक पात्र हुन् जुन मलाई साहित्यमा सबैभन्दा मनपर्दछ। फिट्ज गेराल्डका सबै कार्यहरू धेरै तहहरूको साथ पूर्ण हुन्छन् जुन तपाईले प्रत्येक नयाँ पठनमा फेला पार्नुभयो। र ग्यात्स्बी मेरो मनपर्ने पात्रहरू मध्ये एक हो।
DMS: मसँग कुनै खास उल्लेखनीय उन्माद छैन जब यो लेखनको कुरा आउँछ। म के भन्न सक्छु त्यो हो म एकदम विवेकशील छु, म धेरै लेख्छु र लेख्छु परिणामसँग सन्तुष्ट नभएसम्म म एक द्रुत लेखक होइन, म उपन्यास र स्क्रिप्टमा दुबै लिने कदमहरूको बारेमा धेरै सोच्दछु र मनन गर्दछु किनभने म विश्वस्त छु कि राम्रो कामले राम्रो परिणाम दिन्छ।
र लेखन को पेशा अझै एक काम हो र, जस्तै, म हरेक दिन लेख्न कोशिस गर्छुमसँग मेरो तालिका छ, म तिनीहरू मध्ये एक होइन जो प्रेरणाले भरिएको छ, यो एकदम थोरै रहन्छ। साथै मँ एकै समयमा धेरै प्रोजेक्टहरू हातमा लिन चाहन्छुत्यसोभए जब म एकको साथ अडिन्छु, म अर्को लिन सक्छु र अगाडि बढ्न सक्छु। यो अवरोध पार गर्न उत्तम तरिका हो, कथालाई केहि बेरमै आराम गर्न दिनुहोस्।
Y पढ्ने समयमा हुनसक्छ मैले गर्न सक्ने एकमात्र शौक त्यो हो मलाई मौन चाहिन्छ, मलाई विचलित गर्न केहि पनि छैन।
DMS: म सामान्यतया लेख्छु घरमा, तर समय-समयमा मaमा जान परिवर्तन गर्न चाहन्छु कफी पसल, एक पुस्तकालय। दृश्यको त्यो परिवर्तन, त्यसैले कुरा गर्न, यसले मलाई प्रसारित गर्न मद्दत गर्दछ र नियमित ठाउँमा समान स्थानमा कार्य गर्ने भावना राख्नु हुँदैन। यो सत्य हो कि महामारीले मेरो लागि यो बानी परिवर्तन गरेको छ, तर म आशा गर्दछु कुनै समय यो पुनः सुरु गर्न सक्षम हुनेछ।
AL: थप साहित्यिक विधाहरू जुन तपाईंलाई अपील गर्दछ?
डीएमएस: मेरो पहिलो उपन्यास एउटा अपराध वा अपराध विधाको हो भन्ने तथ्यले यो मेरो मनपर्ने विधा हो भन्ने होइन, वास्तवमा म अपराध कथाको ठूलो पाठक होइन। वास्तवमा मलाई के मन पर्छयद्यपि यो एक ट्रुइज्म देखिन्छ, राम्रो किताब हो। र मेरो लागि राम्रो किताब के हो? एक जब तपाईंले यसलाई पढ्नु समाप्त गर्नुभयो तपाईंलाई थाहा छ कि यसले तपाईंको सबै जीवन साथ गर्दछ, एक जहाँ म महसुस गर्दछु कि पछाडि एक राम्रो लेखक छ र म उपन्यासको काम देख्छु, त्यसले मलाई सोच्न लगाउँछ, त्यसले मलाई पछाडि छोड्छ। र एक राम्रो पुस्तक पनि एक हो जसले ममा निश्चित ईर्ष्या उत्पन्न गर्दछ, स्वस्थ ईर्ष्या, एक दिन म त्यस्तै केहि लेख्न सक्षम हुनेछु भनेर थाहा छैन।
AL: तपाईंको हालको पठन? र के तपाई हामीलाई लेख्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ?
WMD: पढाइ जम्मा हुन्छ, मसँग पढ्नको लागि समय भन्दा म किन्नुहोस्। म समाचारको लागि ढिला हुन चाहन्छु त्यसैले अहिले पढिरहेको छु बेर्टा इस्ला, जेभियर मारियास द्वारा, र म टेबुलमा अरु धेरै मानिसहरुसँग आफ्नो पालो पर्खिरहेको छ।
र के म लेख्दै छु, अहिलेको लागि म हुँ एक श्रृंखलामा काम गर्दै जुन म अझै धेरै भन्न सक्दिन तर त्यसले अर्को बर्षको उज्यालो देख्नेछ र आकार दिन कोसिस गर्‍यो म के हुन चाहान्छु मेरो दोस्रो उपन्यास। रजिस्टरको परिवर्तन, अधिक आत्मीय र व्यक्तिगत उपन्यास जसले प्रेमको बारेमा कुरा गर्दछ, एक प्रेम उपन्यास होइन, तर एक उपन्यास प्रेमको बारेमा र हामी कसरी यसलाई महसुस गर्छौं वा बाँच्दछौं भनेर वर्षौंसम्म, किशोरावस्थादेखि हामी केलाई मध्यम आयु भन्छौं।
WMD: जटिल। मलाई लाग्छ एक प्रकारको छ कहिलेकाँही प्रकाशित गर्न चाहेको जरुरीता यो भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण कुरा लेख्न चाहानुहुन्छ। कुनै पनि पुस्तक, चाहे उपन्यास, निबन्ध वा कुनै अन्य विधा, लाई कामको समय चाहिन्छ, धेरै लेख्न र लेख्न आवश्यक हुन्छ र यसले मलाई यस्तो अनुभूति दिन्छ कि पर्याप्त रूपमा काम नगरिएका उपन्यासहरू प्रकाशित हुन्छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, स्वयं प्रकाशित।
लेख्नेहरूको उद्देश्य हो, पक्कै पनि प्रकाशित गर्नु हो, तर लेखक आफैंसँग धेरै माग गर्नुपर्दछ, कुनै पनि कुरा चाहे जतिसुकै प्रकाशित गर्न पनि उपयोगी हुँदैन, तपाईंले लेख्दा अहंकारलाई अधिकतम गर्न न्यूनतम गर्नुपर्दछ। अर्को नकारात्मक बिन्दु यो अहिले प्रकाशित भएको जस्तो देखिएको छ कि कति राम्रा उपन्यासहरू बेवास्ता गर्दै छन् र अन्य जुन त्यस्तो उज्ज्वल छैनन् सफल छन्। कहिलेकाँही सामाजिक सञ्जालहरूमा पदोन्नति उपन्यास को गुणवत्ता भन्दा बढी काम गर्दछ। आशा छ यो परिवर्तन हुन्छ।
AL: हामी बाँचिरहेको महत्त्वपूर्ण पलको लागि तपाईंले स्क्रिप्टको कल्पना गर्नु हुन्छ? के तपाईं भविष्यका कथाहरूको लागि केहि सकारात्मक वा उपयोगी राख्न सक्नुहुन्छ?
डीएमएस: त्यहाँ सदैव apocalyptic प्रकार का कथाहरु छन् कि, यो कोविड संग, हामी उनीहरु को नजिक छौं। यो सत्य हो कि यो पहिलो व्यक्तिमा बाँच्नको लागि फरक छ, तर यदि मैले केहि सकारात्मकको साथ रहनुपर्‍यो भने यो संगै छ मानसिक धीरज जुन हामी सबैले विकास गर्न सिक्यौं। यो सत्य हो कि कहिलेकाँही त्यस्तो व्यक्ति एक्लोपना, बोरियतको सीमामा पुगेको छ र यस सपनाको अन्त्य देखीरहेको छैन। तर मलाई लाग्छ कि, सामान्य सर्तहरूमा, अरू कसलाई कम से कम सम्भावित तरीकाले यसलाई कसरी राम्रोसँग सम्हाल्ने भनेर थाहा छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » डानियल मार्टेन सेरानो। अनिद्राको लेखकसँग अन्तर्वार्ता